Dating amathiphu ukugwema hubu.
Lapho ngiqala waqala ukuphola Internet, Ngangineminyaka umqondisi ukumaketha for one of ukwakhiwa yeenkampani Milwaukee sika, Ngaya esikoleni esigcwele, futhi ngisebenza on ukunyathelisa encwadini izinkondlo. Nokho, Ngazibuza, akazange kungani ngahlangana umuntu ilungelo kodwa? It never sekuhlaluka kimi ukuthi crazy yami, schedule frenetic kungenzeka kube isizathu.
I wasondela dating Internet like omunye project umsebenzi. Ngokushesha ngase Email nokuhlangabezana guys ezintsha ngesisekelo kaningi kakhulu. Kunjalo, I njalo wahlangana nabo endaweni ethile elula futhi esheshayo, a esitolo ikhofi njengoba endaweni yami oyintandokazi. Ngangibona kuyavela, uxoxe ihora (owawungumnyaka njalo ukubusa yami siqu) bese endleleni yami. Kwaba nje omunye umhlangano Ngahlola ngengqondo off uhlu lwami esandayo to-do sika.
Futhi isiqiniseko, the guy ngezikhathi ezithile kwakuyoba gripe ngoba kuzodingeka ukuba sihlehlise dates zethu… futhi sihlehlise… bese ngezinye izikhathi, ukukhansela. Kodwa hey, Ngicabange kanjalo, uma akakwazi ukuqonda ukuthi Ngingumfana intombazane ematasa ukuphila kwami ​​siqu ngaleso sikhathi wayesesangweni alikufanele usawoti yakhe. Right?
Kwaze kwaba ngahlangana oyedwa nge-imeyili, owayeneminyaka athe abadala kunami, nezingane futhi ibhizinisi waqala up and ayesanda lanwetshwa. Waduma smart futhi ezithakazelisayo futhi wawuvusa ilukuluku imeyili zakhe. Ekugcineni kwafika usuku lapho savumelana ukuhlangabezana. I sahlela usuku ekhalendeni kwami ​​ngesonto elilandelayo, kodwa njengoba usuku wasondela ngabona yayingekho indlela Ngingathanda ukwazi ukwenza isikhathi futhi wambiza ukuba ukukhansela. Wayengumuntu nomusa futhi saqhubeka ukukhuluma ocingweni, isikhathi ngasinye Ngangifuna ukuthola kuye off the line ngoba ngacabanga kuzodingeka isikhathi simazi once sahlangana. Thina wahlela esinye usuku futhi kwadingeka ukuba ukukhansela ukuthi kwaba kanye kanye last minute isiphakamiso base kwavela edeskini lami ngezilokotho boss yami engakwazi-to-sicela.
Nginamahloni ukusho I wahlelelwa date izikhathi zethu ezintathu more. Bese ekugcineni, Kamuva ekugcineni umbhangqwana amasonto ngahlangana naye ilungelo ngaphambi Christmas. I wayezithathe usuku off emsebenzini kodwa wayehamba ukuba 'ukubamba up’ on last minute wamaphepha. Ngavuma ukuba bahlangane naye for a cup esheshayo ikhofi endleleni yami.
Wayengumuntu handsome futhi funny futhi Ngithande kuye ngokushesha. Khona wathi into ongenze ayeke emikhondweni yami, inaliti loudly msindo off the soundtrack ukuphila kwami ​​okumatasa.
I once wenza incwadi ukusayina at Barnes ne-Noble futhi wamukelwa yilo ukuvulwa owesifazane redheaded fiftiesh. “Kuyini up wonke amadoda alala online?”. Kwakukhona abanye ukuhleka, futhi abanye izandla kanye. Ngangingakabhapathizwa ngaso sonke kusimangaze umbuzo, ngoba uma bengingenza ukukhuluma ekamelweni amadoda amabili nanhlanu, akungabazeki ukuthi singathintana umbuzo ofanayo mayelana abesifazane.
My impendulo pat kulezi izimo ukuzama ukuzwelana abaqambimanga ngaphandle bevuna ukuziphatha kwabo. Ake sicabange: Kungani abantu amanga? 1) Ngenxa zizizwa zingalondekile futhi 2) Yingoba bayazi ukuthi uma iqiniso, ngeke ngisho uthole usuku. Pretty kuqondile, kwesokudla? Not for the abesifazane kule izilaleli. Empeleni, akagcinanga ba bristle at ngokuqhathanisa amanga besilisa (bad) amanga female (akunjalo bad), kodwa waphikelela ukuthi kungcono abangaphucuzekile nakancane ukuba umuntu acele ubudala sowesifazane.
Lalela. Angikwazi ukuyeka amanga, kodwa ngethemba ukuthi ayeke ubuzenzisi. Abaqamba amanga ligxeke abaqamba amanga futhi ikakhulukazi lapho Bitch kimi cocktail amaqembu futhi ikakhulukazi uyakhathaza.
Ngakho ake ukuxosha a nezindaba ezimbalwa ezivamile futhi abazama ukuqonda ukuthi kungani amanga ungumqambimanga.
Uma ungumuntu guy 5'5 futhi 80% abesifazane short ngeke ngisho siphume nawe, nithi uku 5'8′ futhi banethemba charm yakho kuyalinqoba amanga. It asipheli, kodwa unethemba it enza.
Uma ungumuntu 175 LB owesifazane, ungase ushayele wena 'eqinile futhi toned'. Yebo, 'Amakhilogremu extra ambalwa’ noma ngisho 'enkulu’ kungaba kancane more olunembile, kodwa wena namathela incazelo yakho ngoba guys kakhulu ngeke aphendule iqiniso. Uma uhlangana, uzama indiva lokho look badumala ubapha wena, ngoba ubhekene okungenani ukuthola shot sakho fair, kwesokudla?
Futhi abangakwazi ukusola a young-at-inhliziyo 61 Ngonyaka ixhegu noma a bobusha 44 Ngonyaka isalukazi for tweaking iqiniso a tad? Ayazi ukuthi ngenxa yezimo ezingaphezu kwamandla abo, siphelela off a lot of radars abantu. Base fib kancane noma a lot – ukuhlala ibonakale kwamanye daters inthanethi laphaya. Angikho bethi kulungile. Engikushoyo nje ukuthi kwenzeka.
By kakhulu uhlobo lesi medium and abantu abangashadile elihambisana by computer ngaphambi lokuhlangana ne iphesenti ehloniphekile kubo ngeke kungafiki ngokugcwele. It kunengqondo. Yini iphesenti kithi zingalondekile? Yini iphesenti us behluleka ukuhlangabezana nenqubo abanye’ tekutikhumbuta ngokwengqondo? Yini iphesenti kithi smart ngokwanele ukuba bazi ukuthi uthembekile 63 Ngonyaka wesifazane ukhuluphele ubudala ongahlangani tekutikhumbuta iningi amadoda, kuba okuyinto kahle ukuthi kungani yena izikhala ukuthi isithombe iminyaka eyisithupha amathathu esingamakhilogremu edlule?
Iphuzu My akukhona ukuthi kufanele siwamukele abaqambimanga kunento group hug, noma ukubabonga ngokubamba usigcina on izinzwani yethu. Kunalokho, kufanele azame ukuba aqonde futhi amukele iqiniso lokuthi lokhu ukuziphatha okuzokwenzeka futhi kuphila isiqalekiso Ozzy sika gonna, noma gonna J.Lo sika bazohlukana. Ukuthola angry ukuzixazulula lutho futhi konke akwenzayo kuba kukwenze izwakale ababayo engenangqondo, izici ezimbili angakaze ayithole umuntu kuphi.
Kodwa kusukela ngeke siyeke abaqamba amanga, lapha kukhona a izinyathelo ezimbalwa ongazithatha emizamweni ukuba sizigweme:
1) Cela izithombe more. Angazi ukuthi kangaki kumele ukubona ikhanda isibhamu ukuthi ibukeke Natalie Portman, kamuva sathola ukuthi uneminyaka Natalie Portly ekuphileni kwangempela, kodwa ngifunde isifundo sami. Uma I ungathumela izithombe extra zami engazithatha phakathi nonyaka odlule, ke asikho isizathu sokuba omunye umuntu hhayi ukuba nabo kanye.
2) Cabanga izinga izithombe. Film and izingubo ibukeka ezahlukene kunalokho akwenza eminyakeni eyishumi edlule. Isitayela Different, Fashions ezahlukene, ezahlukene umbala Palette. Uma isithombe kubukeka yango, umuntu angase abe kahle kakhulu akufihlayo.
3) Cabanga indlela yokwakheka izithombe. Ngempela uvale up picture futhi ayikho enye izithombe asekelayo? Othile akuyona happy nge wakhe / umzimba wakhe. Bheka kuphela umuntu kusukela esifubeni up? Into Same. Ukugqoka bonke black, bangcwatshwe ngemuva abangane, noma zaphazamisa by a Fern enkulu? Lokho umuntu ecasha, ngesizathu esihle.
4) Cabanga ngokunengqondo. Akwenzeki ufuna ukuqokomisa ngokomzimba, mhlawumbe profile yakho noma ocingweni, kodwa uma into add up, ukwenza inothi. A guy ngubani uzibiza 'waklebhula’ kodwa akenzi lutho wezemidlalo is hhayi ngikutshela iqiniso. Same nowesifazane othi uneminyaka 39 kodwa grandkids ezimbili.
Ngizoya umlando futhi sithi kulungile ukuba umuntu ukuba aqambe amanga akhe / age yakhe KUPHELA uma umuntu evuma kamuva iqiniso profile. Ukuqamba ukwenza ngokwakho avele abantu ezinqumela ewumngcingo search criteria kuhluke kakhulu kusukela amanga ngenhloso yokukhohlisa.
Ukuthola mad at abaqamba amanga ubuye d'Classe. Ngiye ngaxoxa umbhangqwana of guys ngubani zithukuthele kangaka at kokuba waqamba amanga ukuthi benza kubangela amahloni. Omunye utshele off owesifazane ngubani agunde iminyaka emithathu ubudala off wakhe. Elinye Wajika BAMSHIYA KOSIKAZI akazange aphile kuze picture yakhe. To me, lokhu izinto ezimbili yokuhluleka ukwenza ilungelo. The ungumqambimanga screwed up, futhi uzokhokha ngoba ngeke uthole usuku lwesibili, kodwa lokho asikho isizathu sesibazi wakhe for life.
Uma umuntu ekhohlisa wena nge isithombe, isenzo class by hhayi nje ngokuba nomusa, kodwa by amanga wena. Ngokutshela iqiniso, wenze konke ubani senza ukuze kuhlanzwe lonke online ukuphola scene.